Ukukhiqiza ukukhiqiza | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukukhiqiza ukukhiqiza
I-gragrass grass (Galega) - ibhekisela kuhlobo lwezitshalo ezinkulu ezihlala isikhathi eside eziyingxenye yomndeni we-legume. Kunamanye amagama okubamba imbuzi, njenge-rutevka, imbuzi rue, isikhulu. Kunezinhlobo eziningana ze-kozlyatnika - empumalanga nangokwelapha. Okuthakazelisayo kakhulu ukukhiqizwa kwezimbuzi zasempumalanga, ngoba kusebenza njengesitshalo esihle sefolda.
I-Phacelia - i-siderat eyingqayizivele
I-Phacelia ingeyomndeni wamanzi aqhutshwayo (i-hydrophilic) futhi iyisitshalo sonyaka nese-single-cutter. I-Phacelia ibhekwa njengamanzi omquba omnandi, kanye nefodder ehle kakhulu kanye nobunikazi bezinyosi. I-Phacelia ifanelwe ukunakwa okukhethekile ngenxa yokukhula kwayo okusheshayo, okwenza kube khona umthamo omkhulu obuluhlaza.
I-Ryegrass Pasture (Ehlala isikhathi eside)
I-ryegrass ye-grazing, eyaziwa nangokuthi i-ryegrass yesiNgisi ne-Chaff ehlala isikhathi eside, isitshalo se-herbaceous se-genus ye-Flow Chaff, okuyiyona eyomndeni wezolimo. Lesi sitshalo esihlala isikhathi eside sihlala eYurophu, eNyakatho Afrika naseNtshonalanga ye-Asia. Ngezinye izikhathi, uma kungeyona into engavamile, i-ryegrass engapheli ingatholakala emazweni aseMpumalanga ye-Asia, kuze kube se-Western Siberia.
Sakha i-hibiscus engadini
I-Hibiscus isitshalo somndeni waseMalvaceae. Kuyathandwa kakhulu ngabalimi, ngoba cishe zonke izinhlobo zalesi sitshalo ziyaqhakaza kakhulu. Izimbali ze-Hibiscus, ngisho nezinhlobo ezifanayo, zihluka kakhulu. Kuyaziwa izinhlobo ezingaphezu kuka-200 nezinhlobo ezingaba ngu-500 zalesi sitshalo. Uyazi? Isici esihlukile sawo wonke ama-hibiscus - ukuphila okufushane kwezimbali.
Yiziphi izinhlobo ze-clematis
I-Clematis iyakwazi ukumangala nokuthakazelisa wonke umuntu onemifino enomuthi, ama-inflorescences amahle, amafomu ahlukahlukene, ama-shades angavamile, iphunga elimnandi. Umhlali we-subtropics uhambele kahle eYurophu futhi unezinhlobo ezingaphezu kuka-300. Imbali eyisimangaliso ingaba njengotshani, ukuhlobisa utshani lwakho, ubeke i-gazebo ngomvini noma umuthi okumele ukhule ebhodini.
Izici ze-wisteria ekhulayo engadini
I-Wisteria mhlawumbe isitshalo esithakazelisayo kunazo zonke emhlabeni. Ubani ojabule okungenani kanye ekuphileni ukuze acabange izimbali zalo futhi azizwe iphunga layo eliyingqayizivele, uzokhumbula ngalesi sikhathi esimangalisayo impilo yonke. I-inflorescences emifushane emifushane e-raceme ye-wisteria ingafinyelela ku-half-meter, ihlanganisa isitshalo emasikini emilingo, futhi ngokubheka kubo kubonakala sengathi iwile inganekwane.
I-stonecrop ewusizo evelele, ukusetshenziswa kwe-herb ngezinhloso zokwelapha
Ngokuvamile uma sihamba emapaki nasezindaweni zehlathi, sinaka utshani esibheke kuwo. Kodwa ngokuvamile le nhlanzi ingaba, uma kungenjalo insindiso, khona-ke ukusiza okubonakalayo kanye nokusiza ekwelapheni lesi sifo. Ukubukeka okuvelele: isakhiwo sokubukeka okuvelele kuyisitolo sokugcina samakhemikhali e-organic. Iqukethe oxalic, acetic, isolimonic, malic, glyceric, fumaric, citric kanye succinic acid.
Konke okudingeka ukwazi mayelana nokutshala i-thuja, ukuthi ungakhula kanjani i-shrub ehlala njalo eluhlaza
I-Thuja ingomunye wabameleli abaqhakazile kakhulu kwezihlahla ezivame ukuvuthwa. Kuvame ukusetshenziselwa ekuhleleni ukuklama komhlaba. Ama-pyramids amahle kakhulu alesi sitshalo azinakuhlonipha kakhulu ekunakekeleni futhi anempahla ewusizo yokukhipha izinto ezisebenzayo emoyeni - phytoncides. Yilokho abagadi balimi abanohlaza abanohlaza abakhulu abakuhlaza nabalimi behlobo, abakwazi ukukhula thuja, bathandana.
Kungani ungaqhakaza forsytsiya, amaphutha amakhulu ekunakekeleni isihlahla
I-Forsythia (elinye ibizo elithi Forsytia) liyi-shrub enhle kakhulu yomhlobiso, ummeleli womndeni wama-oliva, okuzokwenza kube nomzwelo omuhle wokufudumala kanye nentwasahlobo ezinsukwini zokuqala ezifudumele. Isitshalo se-sun ngeke sithuthukise ukubukeka kwe-garden yakho kuphela, kodwa futhi kuzobangela ukubheka umona phakathi kwabo bonke abadlula.
Amathiphu okutshala nokunakekela i-enothera
I-enotera iyimbali ehlala njalo eyaziwa ngamagama aso aphakathi, okungukuthi: "ebusuku primrose" noma "ikhandlela kusihlwa". Lesi sitshalo sifanelwe amagama anjalo ngenxa yombala wegolide we-efihlekile kanye nokuvuthwa okunamandla kusihlwa. Uyazi? I-enotera ye-genus ihlanganisa nenani elikhulu lemifino yaminyaka yonke, ye-biennial neyomisiwe yama-herbal.
Iyini i-tarragon ewusizo, ukusetshenziswa kwezokwelapha?
Abesifazane besifazane abaningi banesithakazelo sokuthi i-tarragon iyini nokuthi yenzeni. Lesi sitshalo siphinde sabizwa ngokuthi "utshani lwe-Tarkhun", futhi singokwesihlobo soMhlonyane. Lesi sihloko sizokutshela ngezinto ezizuzisayo zesitshalo, kanye nezifo ezingaphulukiswa ngosizo lwalesisithombo esimnandi. Ukwakhiwa kwamakhemikhali we-tarragon Ukubunjwa kwamakhemikhali wesitshalo kusiza ukuqonda ukuthi iyiphi indawo futhi ngaphansi kweziphi izifo ezingasetshenziswa.
I-Tarragon: ukukhethwa kwezinhlobo ezivame kakhulu
Umndeni womngane umelelwa emaqoqweni asekhaya abalimi bezimbali nabalimi ngesitshalo semifino emifino esiluhlaza se-tarragon (tarragon), esiqhakaza ngo-Agasti-Septemba ngezimbali eziphuzi (ngokuvamile). Kwenzeka ukuba kube mnandi futhi kungabi mnandi. I-Aztec Aztec inesibopho segama lomsuka waseMexico wasendulo. Unamagatsha amakhulu futhi aneqabunga.
Imithi yokwelapha ye-stonecrop eluhlaza okwesibhakabhaka kunokuba ewusizo "i-hare iklabishi"
Isitshalo esingapheli, esinamaqabunga amnandi nama-inflorescences aluhlaza, sinamagama amaningi (i-hare iklabishi, i-creak, i-stonecrop eluhlaza okwesibhakabhaka) futhi idume ngezindawo zayo zokuphulukisa. Ingqikithi yezitshalo ihlanganisa izinhlobo ezingaba ngu-600, ezibili zasebusika-eziqinile futhi ezishisayo, ezivuthiwe nezimila.
Indlela yokutshala i-tarragon ensimini yakho
I-Tarragon iyisitshalo esingapheli, enye yezinhlobo zomhlonyane. Uyazi? Lona kuphela uhlobo lwezinambuzane ezingenalo isici esibuhlungu besici salezi zitshalo. Ukuphakama kungakhula kumamitha owodwa nengxenye, amaqabunga amancane, kanti ama-inflorescences ahlobo oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka, olusemaphethelweni amahlumela.
Indlela yokusakaza ama-thut thugs ekwindla
Thuja noma, njengoba abantu bebiza, "umuthi wokuphila" uyisihlahla esivela njalo kumndeni we-cypress. I-Tui ayithobekile emhlabathini kanye nesimo sezulu, ngakho kulula ukuhlangana emadolobheni amakhulu. Ayasetshenziselwa kakhulu ukuthungatha indawo ye-megalopolises, kodwa futhi engadini. Izitshalo zibeka kahle indawo bese zitshala ezikhungweni eziphilayo.
Izimfihlo zokutshala nokunakekela iberis
Iberis enhle kakhulu, engowomndeni wesiphithiphithi, iyaziwa kakhulu ngabaxhumanisi be-alpine slides, izingoma ezibhebheni ezimibalabala, rockeries. Ekubukeni kufana neklabishi nesithombo. Iberis ayizithobeki ekutshaleni nasekunakekeleni, ngakho-ke ngisho nomlimi we-novice angayiphatha. Uyazi?
Izinhlobo nezinhlobonhlobo zensimu ye-cypress
Izinhlobo zezihlahla ze-cypress ziyahlukahluka kakhulu phakathi kwabo - ngisho ososayensi abakwazi ukubala ngenani inani labo, babiza izinombolo kusuka ku-12 kuya ku-25 futhi bahola impikiswano evuthayo: umndeni noma uhlobo lohlobo olubandakanya lokhu noma lezo zinhlobo. Noma kunjalo, zonke izinhlobo zemithi ye-cypress kusukela esikhathini esidala ziyasetshenziswa umuntu. Lesi sitshalo sijabulela uthando lomuntu, ngoba linalo: izinkuni ezithambile nezikhanyayo ezinezinto eziphezulu ze-resin (imikhiqizo ye-cypress ingagcinwa kahle iminyaka emakhulu); Izakhiwo ze-fungicidal (isikhunta nezinye izidakamizwa zigwema i-cypresses); iphunga elimnandi (impepho yenziwe nge-tar); izimfanelo zokwelapha; ubuhle nokuhlobisa.
Amathiphu aphezulu ekunakekeleni ngaphandle
UCalla uhlale eheha uhlobo olungavamile lwe-inflorescence, ukubukeka okumangalisayo nokuphunga okungavamile. Kodwa abalimi bembali bayakuthanda ukuthi imbali ingakhula kalula kokubili engadini nasembizeni ekhaya. Kunoma yikuphi kwalezi zimo, i-calla isitshalo esingaqondile. Ukutshala kwe-callas ensimini entwasahlobo. Ukutshala kwe-callas emhlabathini ovulekile kwenziwa kuphela entwasahlobo.
Yonke into oyidingayo ukuze ukhule i-sunflower: amathiphu asebenzayo we-newbies
I-Helianthum (kusukela ngesiGreki. I-Helios - ilanga ne-anthos - imbali), ngesiRashiya - i-sunflower, isitshalo esihle kakhulu esingapheli esinezimbali eziphuzi ezibomvu, ezibomvu, ezibomvu noma ezimhlophe, okuthi ngenxa yokungazitholi nokukhula okusheshayo, iyakwazi ukuhlobisa iholide isakhiwo. I-shrub ehlala njalo eluhlaza isitshalo eside kuze kufike ku-30 ​​cm ubude ngamaqabunga omthunzi omnyama noma obomvu osiliva.
Izimbangela zokuntuleka kwezimbali ku-callas, izifo nezinambuzane zembali
Ithenda lezimbali, ama-callas amahle kakhulu. Izimbali zalesi sitshalo zihle kakhulu futhi zinhle kakhulu. Naphezu kokuthi ukunakekelwa kwe-callae akudingi umzamo omkhulu, kunezinamba eziningi zezifo ezingaholela ekungabikho kwezimbali noma ukufa kwesitshalo. Kusukela kulesi sihloko uzofunda ukuthi kungani kuphakama izinkinga ezinjalo futhi yiziphi izinyathelo zokulwa nezifo ze-callas.